zithini ii-oracle zovavanyo kunye novavanyo lwe-heuristics?
Eyona Qa Zithini ii-Oracle zovavanyo kunye novavanyo lweeurology?
Zithini ii-Oracle zovavanyo kunye novavanyo lweeurology?
Kwilizwe lovavanyo kunye nokuqinisekiswa komgangatho, sihlala siwava amagama oVavanyo lweeNdaba zoVavanyo kunye noVavanyo lweeVavanyo, kodwa zithini kwaye singazisebenzisa njani kwimisebenzi yethu yovavanyo yemihla ngemihla?
Makhe sibone inkcazo emnandi kakhulu yovavanyo lwee-oracle kunye novavanyo lwe-heuristics UKatrina Clokie
Cinga ukuba ndifuna ukutya ipile. I-pickles yam igcinwe kwisitya esikhulu seglasi. Kwindlu yam, umntu wokugqibela ukutya ipilethi ngumyeni wam. Uye wayivala ngqayi ingqayi. Kwimizamo yam yokuqala, ndiyasilela ukuyivula.
Ndenza ntoni ngokulandelayo?
Ndijonga ukuba ndijikela ngasekhohlo ukukhulula isiciko kwaye ndizame kwakhona. Emva koko ndifumana itawuli yeti ukumisela ukubambelela okungcono xa ndigqwetha isiciko sebhotile. Okokugqibela, ngolunye udano, ndiye ndiyokukhangela umyeni wam. Uvula ngempumelelo ingqayi.
Xa ujongene nengqayi engazukuvula zininzi izinto endaziyo ukuba kufanelekile ukuba zizanywe. Ezi zizinto zam zokuvula ingqayi yam. Xa ndiyalelwa ukuba ndivavanye usetyenziso lwesoftware kukho izinto ezininzi endaziyo ukuba kufanelekile ukuba zizanywe. Olu luvavanyo lwam lweemvavanyo.
I-Heuristics yindlela elula esekwe kumava ekusombululeni iingxaki, ukufunda, kunye nokufumanisa. Apho ukukhangela okupheleleyo kungenakwenzeka, iindlela ezisetyenziswayo zisetyenziselwa ukukhawulezisa inkqubo yokufumana isisombululo esonelisayo. Imizekelo yale ndlela ibandakanya ukusebenzisa umthetho wesithupha, uqikelelo olufundileyo, isigwebo esinomdla, okanye ukuqonda.
Masithi uvavanya iwebhusayithi ye-e-commerce. Uninzi lwee-commerce zewebhusayithi 'iphepha lesiphumo sinezihluzo kunye nokuhlelwa kokusebenza. Kwiminyaka yokuvavanywa kwamawebhusayithi e-commerce, ndiye ndafunda ukuba ukudibanisa amacebo okucoca ulwelo kunye nokukhetha ukhetho kunokubonisa iibugs ezinomdla, njengoko bekunjalo amaxesha amaninzi, ke, kwiprojekthi yam elandelayo, ndiza kuvavanya iimeko ezithile inxulumene nokudibanisa amacebo okucoca ulwelo kunye nokukhetha uhlobo.
Khawufane ucinge ukuba ndiye kwisidlo sasemini kunye nomhlobo wam. Ndingena kwindawo yokutyela ngo-12 emva kwemini ngoLwesine. Emva kweyure ndizonwabele ukutya, ndishiya indawo yokutyela nge-1 emva kwemini ngoLwesihlanu. Nangona ndinamava ngeyure enye, umhlaba ondingqongileyo utshintshile ngemini.
Ndazi njani ukuba kukho ingxaki apha?
Ndingaba nezaziso ezininzi kwifowuni ephathwayo kubahlobo nakwintsapho ndizibuza ukuba ndiphi. Ndingafumana itikiti lokupaka. Ndingabona umntu efunda iphephandaba langoLwesihlanu.
Zininzi iindlela apho ndinokuthi ndibone ukuba ndigqithile kumhla wobomi bam. Eli lixesha lam lokuhamba ngeentetho. Zininzi iindlela apho ndinokuthi ndibone ukuba ndifumene i-bug kwisicelo se-software. Ezi ziimpawu zam zovavanyo.
Ii-Oracle ngumgaqo nje okanye indlela esibona ngayo ingxaki. Iimvavanyo zovavanyo ngokusisiseko ziziphumo zakho ezilindelekileyo.
Masithi uvavanya ukusebenza kokungena kwiwebhusayithi. Kuqala, unokujonga ngegama lomsebenzisi elifanelekileyo kunye negama lokugqitha elisebenzayo kunye lindela ukubona nokuba ulungelelwaniso kwiphepha lam leakhawunti okanye uthumele kwiphepha ngaphambi kokungena. Nangona kunjalo, emva kokuzama ukungena ngemvume kwaye ubona impazamo kwimpendulo eyi-500, wena yazi ukuba kukho into engahambanga kakuhle.
Ii-Oracle kunye ne-Heuristics kwi-Agile kunye noVavanyo lokuHlola
Zombini ii-Oracle zovavanyo kunye novavanyo lweeurology zibalulekile xa kuziwa kuvavanyo lokuhlola kwindawo ye-agile. Xa singenaxesha laneleyo lokwakha amatyala ovavanyo kwaye imveliso iyaqhubeka ngokuqhubekayo, asinakuthembela kwizikripthi zovavanyo esele zenziwe kwangaphambili, kufuneka sisebenzise ulwazi lwethu lwesizinda (ii-Oracle zovavanyo) kunye namava ovavanyo lwangaphambili (Uvavanyo lwee-Heuristics ukubanakho ukuyila ngokukhawuleza kunye nokwenza iimvavanyo ngaxeshanye ngelixa ufunda ngemveliso.
Isifundo seJmeter: Uyithumela njani ifayile yeJSON njengeSicelo kuMzimba
I-Samsung Galaxy S20 Ultra vs Galaxy S10 Plus
I-Costco ineGlass S10 yombulali, Qaphela i-10 +, kunye ne-Surface Pro 7 egcina iVenkile yangoLwesihlanu oMnyama